9 Ka 2017
Ihe mere ejije WiFi gị na otu esi edozi ya
Ihe mere na-efu WiFi
Owa na ugbo
fọrọ nke nta Ebube Wifi na netwọk ụlọ. Anyị niile ejirila mmegbu nke WiFi n'ụlọ na nkwụsịtụ ndị ọzọ, nkwarụ, na ebe obibi dị iche iche na-edozi dịka ntakịrị karịa nkwenkwe ụgha. Ọ bụrụ na ị bụ onye nlekọta IT dị njikere, na-achọ ụzọ ị ga-esi kọwaa ndị enyi gị na ndị enyi gị ihe kpatara ya iji mee ka ha ghara ịchọta ihe ha ga - eme ka ọ ghara ịrụ ọrụ - gịnịkwa ga - eme?
N'elu ohere na ị na-amaghi IT na ịchọ ebe ị ga-esi nweta ahụmahụ siri ike na-akọwa usoro WiFi, nke a bụ ihe nkwado na WiFi ịhazi na akwụkwọ ntuziaka iji tinye ụlọ gị n'ọrụ dị ka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ maka aptitudes ị ga-eji mee ihe kwa ụbọchị dị ka onye na-enyocha IT.
WiFi site na njirimara ya dị njọ karịa nkedo banyere àgwà na-enweghị atụ na ike mgbaàmà. Ihe ịrịba ama ndị na-agafe ihe dị ka waya nwere ụzọ dị mma. Ngosipụta ikuku nwere ike itinye aka na ibe ha ma ghara ịhapụ ike ha ka ha na-esite na isi iyi nke nnyefe. WiFi bụ ịdabere na ahia, mana ọ bụ ọtụtụ ndị mmadụ dị njikere ịme - ọ dịghị ebe ọ bụla na-ejikọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaọrụ anyị. Ya mere, anyị na-achụ ike nke akụrụngwa anyị maka oghere ugbochi dị iche iche nke na-ese n'elu mbara igwe. Ihe kachasị mma anyị nwere ike ime bụ jupụta oghere na blanket ahụ, na-eme ka ọ bụrụ ọbụna ụzụ na-ekpo ọkụ nke òtù na-ekpuchi ụlọ gị dum.
Ndị na-emegharị na-elele okporo ụzọ weebụ. Ịnwere ike ịmatakwu banyere ikike ha na akụkụ nke mbụ ahụ Keith nwere ntụgharị na ngbanwe. N'ọnọdụ ọ bụla, mgbasa ozi ndị ISP kwadoro bụ ihe ngwaọrụ 2-na-1. Ha abụọ na-elekọta okporo ụzọ ma na-eziputa redio na-ekpuchi njikọ gị ikuku. Nke ahụ bụ ihe na wiwi ndị na-ebigharị na ngbanwe gị bụ maka na a pụrụ ịrata gị iji dọọ ha aka n'ebe ntụpọ na ụlọ gị, mana atụmatụ nke ikuku na-eche na ọ ga-emepụta ma kpọsaa na njedebe nrịgo 90. Yabụ hụ na ha na-eme ka ha kwuo ya n'otu ihe ahụ, ma ọ bụ ma ọ bụ ma ọ bụ n'ụzọ dị nro.
Ọ bụ ezie na ọnọdụ ikuku nwere ike ime ka ọ dịkwuo mma, ọ ga-abụ na ọ gaghị ekpuchi ụlọ gị dum. Ebe ọ bụ na 2-in-1 switches na-arụ ọrụ abụọ na okpukpu abụọ, ma ọ bụ nanị otu n'ime ha, ha na-adịkarịghị ihe ịga nke ọma karịa ngwaọrụ ndị a kpọrọ aha WiFi Access Points (WAP).
Mgbanwe igwegharị na WiFi kaadị ngwaọrụ na-agba mbọ na-emebiga oke ókè na agha iji mee ka ebe obibi zuru oke. Kama nke ahụ, otu WAP ndị si n'aka onye yiri ya ga-ekwurịta okwu n'etiti onwe gị, ma nyekwuo ebe obibi gị dị ukwuu.
Cheta na ngwaọrụ ndị a ka na-emepụta ihe na-egosi na ọ bụ n'ozuzu ya, ọ bụghị ntaneti. Na ohere ị nwere na ị nwere ọtụtụ ụlọ akụkọ ọtụtụ ị ga-achọ ka ọ bụrụ ihe na-erughị otu WAP n'elu ala ọ bụla.
Ngwaọrụ WiFi na ngwaọrụ WiFi nwere ike ikwurịta okwu n'eziokwu nke na ha na-eji usoro yiri nke ahụ ekwupụta: ụkpụrụ 802.11, nke na-akọwa otú ngwaọrụ ndị ahụ nwere ike isi kọwaa ozi crosswise n'elu ọwa dị iche iche.
N'ime ụdị 802.11 dị iche iche, ngwaọrụ dị iche iche ga-enwe ike iji nkwurịta okwu, ndị a niile bụ ndị na-enweghị ikikere, nke pụtara na ha anaghị achịkwa ma ọ dịghị mkpa ka ị nwee nsogbu na nkwenye zuru oke iji kpọtụrụ ha. Ha bụ maka akụkụ kachasị maka mkpirịta ụka dị mkpirikpi, ya mere ọgbụgba dị mgbagwoju anya adịghị - ị gaghị ekwurịta okwu na nlọghachite nke ụsọ ụda nke ụtụtụ gị DJ. Otú ọ dị, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọwa ahụ dị nso n'ebe ibe ya nọ ma ọ bụ ihe dị mma maka WiFi na agbasa ozi ọma site na ụlọ ndị agbata obi, ma ọ bụ site na ngwaọrụ n'ime ụlọ yiri ya, iji kpuchie ọwa.
Ị nwere ike ịhọrọ n'etiti setịpụ ngwaọrụ gị maka 5GHz ma ọ bụ 2.4 GHz. Ihe kachasị mbara bụ 2.4 na ọwa dị n'akụkụ ahụ nke zuru oke n'ebe ọ bụla ọzọ ka ha ghara itinye aka bụ 1, 6, na 11. Ndị a bụ mkpebi ndị kachasị mma, ọ bụrụ na ị họrọ ha, ị ga-achọ ka ị ghara ikpuchi ndị agbata obi gị.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere WAP ma ọ bụ gbanwee na ozo yiri, n'agbanyeghị na o nwere otu n'ime atọ edere n'elu, ha ga-etinye ma gbasie gị WiFi. Ị nwere ike ịkwaga 5GHz n'eziokwu nke na n'agbanyeghị na eziokwu ahụ nwere mgbagwoju anya, nke ahụ bụ n'ezie uru na-akpata na enwere ike ịbụ ọwa doro anya n'ebe ahụ.
Olee otu esi ewuli ulo oru ahia?